Royal FEUD: sida Prince Prince loo aqoonsaday Prince Edward IDIOT kadib BIG ROW & # 039; - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Royal FEUD: sida Prince Prince loo aqoonsaday Prince Edward IDIOT kadib BIG ROW & # 039;
Royal FEUD: sida Prince Prince loo aqoonsaday Prince Edward IDIOT kadib BIG ROW & # 039;
Marka dhalashada Prince Andrew iyo Prince Edward, qaar waxay ku andacoonayaan inay yihiin sidii qoys labaad oo kale Queen . Waxay ku dhowdahay toban sano tan iyo markii ay dhashay Princess Anne oo dhashay Prince Charles ku dhowaad 12 sano jir, ayaa ka maqnaa dugsiga. Waxaa si weyn loo aqbalay in farqiga da'da ee walaaluhu uu yahay mid ka mid ah sababaha ugu wayn ee Prince of Wales marnaba looma helin Andrew iyo Edward iyo, sanadihii la soo dhaafay, murugada aabaha ah ee ku wareegsan wargeyska ayaa ahaa mawduuc soo bandhigid badan.
2019 5 dukuminti ah "Royals at War" ayaa xasuusta mid ka mid ah isku dhacyadii ugu xumaa ee u dhexeeya Charles iyo Edward, oo dhici lahaa ka dib markii Earl Wessex uu ku soo weeraray nolosha gaarka ah ee wiilka Prince of Wales, Prince William in 2001.
Qoraaga boqornimada Katie Nicholl yiri: "Marka Prince William ahaa in kulliyad iyo fariin adag oo ah hoyga boqorka warbaahinta la daabacay, waxaa jiri doono hab maamuuska markii Prince William markii ay dhacdana, saxaafada ayaa ahayd inay keligii ka baxdo amiirka.
"Waxaa jiray shaqaale filim ah oo xayiray".
Penny Junor oo ah farshaxan royal ah ayaa xusay in Prince Charles Saxafi Shaqaale filim ah ayaa wali raadinaya dhow meel u dhow Jaamacadda St Andrews, halkaas oo William uu doortay inuu waxbarto.
Charles ayaa si cad u eedeeyay walaalkiis ka yar, Prince Edward, oo ah "foolka" (Sawirka: GETTY)
Markii Prince Andrew iyo Prince Edward ay ku dhasheen, waxay u egtahay sida boqoradda labaad ee qoyska (Sawirka: GETTY)
Waxay tiri, "Waxay dhaheen, 'Waxaan u shaqeynaynaa Prince Edward, waad ogtahay inaan heysano ogolaansho halkan. Waxay ku jawaabtay "Tani dhab ahaantii ma ahan kiiska" iyo in wax waliba ay si weyn u soo qaadeen. "
Ms. Nicholl ayaa sheegay in tani ay horseedday Charles si uu teleefishinka u qaato Edward iyo "iyada oo aan la shaacin shuruudaha, isaga oo u sheegaya in uu ahaa caqli iyo ereyo yar oo doorasho aan ahayn midkaas".
Waxay ku dartay, "Fariinta waa cadayd "Adiga waxaad u dhaqantay si aan habboonayn. ha St Andrews markiiba. "
Inkastoo ay isku dhaceen, Prince Charles lahaa lahaa xiriir xariif ah walaalkiis kale Prince Andrew.  Sida laga soo xigtay dokumenteriga, khilaafka u dhexeeya labada ayaa laga yaabaa inay sababeen faragelinta muuqaalka boqoradda Duke of York.
Prince William wuxuu bilaabay kuleejka 2001 (Sawirka: GET TY)
Prince Edward ayaa lagu soo eedeeyay inuu ku soo galay weerarkii Prince William ee ahaa (Sawirka: GETTY)
Hore ee Butler Paul Burrell ayaa yiri, "Waan ogahay inay u muuqato wax qariib ah, laakiin waa run.
"Andrew wuxuu had iyo jeer ahaa wiilkii ugu fiicnaa boqoradda .
"Weligiis waxba kama qabin indhaha boqorada "
Penny Junor wuxuu kudhuftay, "Waxaan u maleynayaa in Andrew uu yahay kan ugu wanaagsan ee boqoradda ah waxaanan ka shakisan yahay in ay heli karto boos yar oo indhoole ah isaga. "
"Kaniisadda Amiens way ka roon tahay tan Paris ka jirta"
Dina Lohan waxay beddeshay maskaxeed kadib markii ay aqbashay soo-jeedin internet ah - dad